safalstories Archives - Page4of6- Safal Stories
आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहनुभएको छ ? ८ टिप्स
जीवन सधै एकै लय बग्दैन । हरेक दिन नयाँ नयाँ परिस्थितिहरु सिर्जना हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीं आफूलाई एकदमै कमजोर महसुस...
करियर निर्माणको लागि सहयोगी भनाइहरु
कहिले हामीलाई करियर रोज्नमा द्विविधा हुन्छ भने करियर रोजिसकेपछि आउने विभिन्न बाधा तथा विचारहरुले अलमल बनाइदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रेरणा...
तपाईं कस्तो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? आफूसंग सोध्नुहोस् यी ५ प्रश्न
हामी सबैसमय दिमागले मात्र चल्दैनौं । भावनाले पनि चल्छौं । यसैक्रममा सम्बन्धहरु पनि स्थापित हुन्छ । पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धका कारण धेरै...
सफलताका लागि अमिताभ बच्चनका सुझाव
अमिताभ बच्चन प्रख्यात अभिनेता हुन् । हिन्दि चलचित्र उद्ध्योग अर्थात् बलिवुडका महानायक मानिने उनी संसारभर सफल अभिनेताको रुपमा चिनिन्छन्। उनको यो सफलता...
अनुसन्धान भन्छ : छोराछोरीले बोलाउने र कुराकानी गर्ने गर्नाले बढ्छ वृद्ध...
आधुनिक जीवनशैली अति नै व्यस्त बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छोराछोरीहरु पढाइ, करियर, काम आदिलाई लिएर तनावमा आइरहेका हुन्छन् , उनीहरु...
हाम्रो नेपाली भनाइ छ, 'हुने बिरुवाको चिल्लो पात' । योग राज कंडेलमा त्यो गुण हराएको देखेपछि बुवाले उनलाई भारत लगेका थिए ।...
आफ्नो लागि धेरै अवसर आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? ७ टिप्स
हामी सबै अवसरको पर्खाइमा हुन्छौं । तर यत्तिकै बसेर अवसर आउंदैन । त्यसको लागि आफैले प्रयास गर्नुपर्छ ।
1...34566 पृष्ठ 4